6 फेब, 2019
उनै कंगना भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको एक कार्यक्रममा सिनेउद्योगमा रहेको असहिष्णुपना र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका ’boutमा राम्रै गरी खुलिन्। सिनेमा रिलिज अघि उनलाई दिइएको दु:ख र सिनेमा तयार गर्दा सम्मका संघर्षका ’boutमा उनले थुप्रै खुलासा गरिन जसको प्रतिक्षा उनका प्रशंसकहरूलाई थियो। उनले सिनेमा उद्योगमा मोर्चाबन्दी हुने गरेको र उद्योग सस्ता मानिसहरूले भरिएको बताइन्।
तपाईं सबैलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्नुहुन्न। एक समय मेरो मनमा कि संसारले मेरो सत्य बुझ्छ कि म मेरो ’boutमा भ्रम नै राखेर मर्छु सोच्थे। सबै यो अवस्थाबाट जान्छन्। म पनि गएँ। हामी यस्तो अवस्था केहि समय पुग्छौं। जे भएपनि म डिप्रेसेड छैन।। म आफूलाई खुशी राख्छु। आफूलाई साथीभाइ र परिवारको वरीपरी राख्छु। म करियर का’boutमा ज्यादा चिन्तित हुँदिन।
‘मणिकर्णिका’को सफलताले तपाईंलाई सिने उद्योग र दर्शकहरूका ’boutमा के सिकायो?
सिने उद्योगका मानिसहरूले सिनेमालाई लिएर हार्दिक छैनन् र यस विरूद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। उनीहरूले केहि बोलीरहेका छैन् र उपेक्षा गरिरहेका छन्। यो मोर्चाबन्दी यति बलियो छ कि साना भन्दा साना कलाकारले मलाई गोप्यरूप सन्देशहरू पठाइरहेका छन्। तपाईंलाई थाहा छ उनीहरू सामाजिक संजालमा यस’boutमा लेख्न वा बोल्न हिम्मत गरिरहेका छैनन्। यसरी उनीहरूको मोर्चाबन्दी छ। यो होइनकी यसले मलाई चोट दिएको छैन्। यो ‘मेन्टल है क्या वा पङ्गा’ बन्नेछ। यी सिनेमालाई म देशका लागि गरेको भन्दन्। यी यस्ता सिनेमा हुन जो तपाई गरिरहनुहुन्छ र प्रत्येक साता आइरहन्छन्। हामी ‘क्वीन’, दंगल’ वा समाजलाई प्रभाव पार्ने सिनेमाका लागि साथै उभिन्छौं। सबैजना ‘मणिकर्णिका’को लागि पनि उभिनुपर्छ तर लाजमर्दो के भयो भने यसलाई लिएर उनीहरूका खिच्चोपना आइरहेको छ। मलाई वास्तवमा के लाग्छ भने सिनेउद्योग सस्ता र छोटा मानिसहरूले भरिएको छ जो राम्रो वा नराम्रो भन्दा माथि उठ्न सक्दैनन्।
सोनु सुदलाई सिनेमाको ’boutमा बोल्ने कुनै अधिकार छैन्। सम्झौता रद्ध भइसकेको सिनेमाको ’boutमा बोल्ने उसलाई अधिकार छैन्। ऊ सिनेमालाई बदनाम किन गरिरहेको छ? यस्ता मानिसहरूको भित्र मनमा कुषित मनसाय हुन्छ। यसको सबैभन्दा खराब कुरा भनेको उनीहरूको आफू पनि सिनेमाको एउटा भाग हुन् भन्ने दाबी हो। यसरी परिस्थितिलाई मानिसहरूले आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने कुरा आफैमा ताजुब पार्ने किसिमको छ। खैर! जेसुकै होस्, सिनेमाले विश्वव्यापीरूपमा सय करोड कमाइ गरिसकेको छ, अब यसको खुसीयाली मनाऔं।